३० वर्षको अवधिमा विभिन्न आयोगमार्फत् सरकारले करिब ४७ हजार बिघा जग्गा बाँडे पनि सुकुम्बासी परिवारको संख्या झन् बढ्दो छ।
कोभिड–१९ को जोखिम कम गर्न मुलुक बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा रहेकै बेला सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गर्‍यो। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग आदेश २०७६ को दफा ३ अनुसार गठन भएको आयोगले देशभर रहेका भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबास गर्ने परिवार तथा सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरेर जग्गा बाँड्नेछ।
मुलुकभर करिब १६ लाख परिवार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रूपमा बसोवास गरिरहेको सरकारी अनुमान छ। आयोगले काम गर्‍यो भने एकीन तथ्यांक थाहा होला !
सरकारले आयोगको अध्यक्ष बनाएका देवीप्रसाद ज्ञवाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) चितवनका नेता हुन्। गत स्थानीय तहको निर्वाचनले उनलाई देशव्यापी चर्चा दिलाएको थियो।
कोभिड संक्रमणकै बीचमा अन्य अत्यावश्यक काम छोडेर आयोग गठन नगरी नहुने किन? भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्याकुमारी अर्याल सरकारले तत्काल आवश्यक काम गरिरहेको र सम्भव हुने नियमित काम पनि जारी राखेको बताउँछिन्। उनी प्रतिप्रश्न गर्छिन्, “यो बेला कोभिड–१९ बाहेकका काम गर्नै नहुने हो र ?”